Computer Technical Notes & Sharing Softwares: January 2012
window+R ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ 1 gpedit.msc လို့ ရိုက်ထည့့်လိုက်ပါ enter နှိပ်လိုက်ပါ 2.group policy object editor ဆိုတဲ့ box လေးကျလားမယ် 3.အဲဒီ box လေးရဲ့local computer policy အောက်က user configuaration ကိုသွားလိုက်ပါ 4.user comfiguration ကိုသွားလိုက်ပါ.5 user configuaration ရဲ့ အောက်နားမှာ administrative template ဆိုတာလေးကို double click ပေးပြီး သူ့ ရဲ့ အောက်က system ဆိုတာလေးကို double click ထပ်ပေးလိုက်ပါ.6. ပြီရင်တော့ ညာဘက်မှာ၇ှိတဲ့ setting ရဲ့ အောက်နားမှာ ctrl+alt+del ဆိုတာလေးကို double click ထပ်ပေးလိုက်ပါ 7.အပေါ်ဆုံးမှာ မြင်နေရတဲ့remove change passward ကို double click လုပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ 8.အဲဒီမှာ remove change passward properties ဆိုခဲ့ box လေး ထပ်ပေါ်လားပါလိမ့်မယ် 9.အဲဒီ box setting ထဲက enable ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး apply OK. လုပ်လိုက် ကို့ ကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူ မှာ passward လားပြောလို့ မရတော့ပါဘူး .
Posted by SLIP at 7:00 AM0comments
Posted by SLIP at 6:53 AM0comments
အရင်ဆုံး window key+R နဲ့ run box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် diskpart လိုို့ရေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ
diskpart box ကျလာပါလိမ့်မယ်
diskpart box မှာ list volume လို့ရေးပြီး enter ခေါက်ပါ
ကိုယ့်စက်မှာရှိတဲ့ drive တွေကို
volume0, volume 1...
ကျွန်တော်က drive E ကိုဖျောက်ချင်လို့ select volume0လို့ရေးပြီး enter ခေါက်ပါတယ်
ပြီးတော့ remove letter E ဆိုပြီး enter ထပ်ခေါက် လိုက်ပါတယ်
ိdrive E ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ
ပျောက်နေတာကို ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ အခု လုပ်ခဲ့ တဲ့ အဆင့်အတိုင်းပြန်လုပ်ပြီးတော့
remove letter E ဆိုတဲ့နေရာမှာ
assign letter E ဆိုပြီး
Posted by SLIP at 6:57 AM0comments
Labels: command prompt ကနေ drive တွေဖျောက်ခြင်း
Posted by SLIP at 9:34 AM3comments
ဂျပန်စာ ခန်းဂျိ (Kanji) စာလုံး ရေးနည်း လေ့လာရ အောင်
ဒီပို့စ်မှာ ဂျပန်စာလုံး (၃) မျိုး ရှိတဲ့အနက်က ခန်းဂျိ (kanji) လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ဆီက မွေးစားထားတဲ့ စာလုံးတွေ ဘယ်လိုရေး (စုတ်ချက်ဆွဲ) ကြသလဲ ဆိုတာ နည်းနည်း ဆွေးနွေးပါမယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာစာမှာ ပါဠိစာ ကို မွေးစားထားသလိုပါပဲ။ ဂျပန်စာမှာလည်း တရုတ်စာလုံးတွေ မွေးစားထားပါတယ်။ ကွာခြားချက်က မြန်မာစာမှာ ပါဠိစာရဲ့ အသံတွေကိုပဲ မွေးစားခဲ့ကြပေမယ့် (*ပါဠိဘာသာဟာ အသံပဲ ရှိတယ်ဆိုပဲ) ဂျပန်စာမှာကျတော့ တရုတ်စာလုံးတွေနဲ့ သူတို့၏ အသံတွေကို တပါတည်း မွေးစားခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေက han-ji လို့ ခေါ်ပြီး ဂျပန်တွေက kan-ji လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီစာလုံးတွေဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ခေတ်ဟောင်းက စာလုံးတွေပါပဲ။ ဒီတော့ စာလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့အသံထွက်ကွဲပေမည့် ဂျပန်ကော တရုတ်ပါ စာလုံး၏အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်နိုင်ကြပါတယ်။ ခန်းဂျိ စာလုံးပေါင်း ငါးသောင်းလောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ စာလုံးရေ နှစ်ထောင်၊ သုံးထောင်လောက် သိထားတယ်ဆိုရင် အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ စာလုံးမြင်တာနဲ့ ဘယ်လို ရေး (စုတ်ချက်ဆွဲ) ရမလဲ ဆိုတာ နားလည်စေချင်တာ ဒီပို့စ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အောက်က စာလုံးလေးကို လေ့လာကြည့်ပါ။ လှုပ်နေသော ပုံလေး ဖြစ်တာမို့ ဆွဲတဲ့ စုတ်ချက်ကို လိုက်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာလို “မေးခွန်း” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရသော စာလုံးဖြစ်ပါတယ်။ (* ပုံမမြင်ရပါက display images ကို နှိပ်ရန် လိုပါသည်။)
ဒါလေး ကြည့်ပြီးရင် အောက်က စုတ်ချက်ဆွဲနည်းတွေ ဆက်ဖတ်ပါ။ ဆွဲနည်း ဥပဒေသတွေ နားလည်ပြီးသွားရင် ဒီပုံလေးကို လာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဆွဲလိုက်သလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ ယူဆပါတယ် ခင်ဗျာ။
ခန်းဂျိ စာလုံးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် လေးထောင့်စပ်ပါတယ်။ ပိန်ရှည်ရှည်ကြီးတို့ ပုပြားပြားကြီးတို့ မရှိပါဘူး။ သစ်ရွက်နဲ့ ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုလျှင် တစ်ချို့စာလုံးတွေဟာ စာတစ်လုံးပဲ ပါပါတယ်။ တစ်ချို့စာလုံးတွေကျတော့ စွယ်တော်ရွက်လို စာနှစ်လုံးပေါင်းပြီး တစ်လုံး လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို radical (ဂျပန်လို ဘုရှူ bushu 部首) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ စာလုံးတစ်လုံးမှာ ဘယ်လောက်ပဲ radical တွေ ပေါင်းစပ်ထားပါစေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးဟာ လေးထောင့်စပ်စပ် ပုံစံနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ radical နှစ်ခု ဘေးချင်းယှဉ်ထားတဲ့ စာလုံးမှာ radical တွေဟာ ရှည်လမျောပုံစံ တည်ရှိနေပြီး radical နှစ်ခု အပေါ်အောက် ပူးထားတဲ့ ပုံတွေမှာ radical တွေဟာ ပြားချပ်ချပ်ပုံစံနဲ့ စာလုံးကို အထောက်အကူပြုနေပါမယ်။ အောက်က စာလုံးတွေ လိုက်ဆွဲကြည့်တဲ့ အခါ မိမိရေးလိုက်တဲ့ စာလုံးဟာ လေးထောင်စပ်နေမှသာ သရုပ်မှန်သော စာလုံးဖြစ်ပါမယ်။ လေးထောင်စပ်အောင် ဘယ်လို ဆွဲမလဲ ? စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ကို ဦးစားပေးဆွဲပါတယ်။ နောက်ဆုံးစုတ်ချက်ဟာ ညာဘက်အောက်ထောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၁) အပေါ်ကနေအောက်၊ ဝဲမှယာ
မျဉ်းတစ်ကြောင်းချင်းဆီကို ဝဲမှယာသို့ ရေးဆွဲရပါမယ်။
၂) ဦးစွာ အလျားလိုက်၊ ပြီးမှ ဒေါင်လိုက်
ပြီးမှ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကို ဆွဲရပါတယ်။
၃) တံစို့ထိုးတံသည် နောက်ဆုံးမှ
ဒေါင်လိုက်မျဉ်းဟာ တံစို့လို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမျဉ်းမျိုးကို နောက်ဆုံးမှ ဆွဲရပါမယ်။
၄) စလွယ်ကန့်လန့် ညာမှစ
ပါနေပါတယ်။ ဥပဒေသ(၁) အရ
၅) ဒေါင်လိုက်ခေါက်ချိုးညီရင် အလယ်ကစ၊ ဘယ်ပြီးမှ ညာ
ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဥပဒေသအရ
အလယ်မျဉ်းမှ စဆွဲပါမယ်။ ပြီးရင်
နောက်ဆုံးမှ ညာဘက်ကို ဖြည့်ပါတယ်။
၆) ဘယ်ဘက်ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကို ဦးစားပေး
၇) ဘောင် အရင်ခတ်ပါ။
ဘောင်ခတ်ပြီး အထဲမှာ တစ်ခုခု
ဒါဆို အဲဒီ့ ဘောင်ကို အရင် ခတ်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင် အောက်က တစ်ကြောင်းပိတ်ပါမယ်။
၈) အောက်ပိတ်မျဉ်းဆို နောက်ဆုံးမှ
အပေါ်ပုံမှ radical နှစ်ခု
အောက်ပိတ်မျဉ်းပါတဲ့ radical သည်
၉) အစက်၊ အပျောက်တွေ နောက်ဆုံးမှ
အပေါ်ပုံမှာ အစက်၊အပျောက် တစ်ခု
ပါပါတယ်။ ဒီအစက်၊အပျောက် ကို နောက်ဆုံးမှ ရေးဆွဲရပါမယ်။
ဥပဒေသက အားလုံးပေါင်းမှ ဒီကိုးချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါလေးတွေ မှတ်မိပြီဆိုရင် မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ ဘယ်စာလုံးမဆို (ကိုယ်မသိတဲ့ စာလုံးပင် ဖြစ်စေ) ဘယ်လို ရေးဆွဲရမလဲ၊ စုတ် ဘယ်နှစ်ချက် ရှိမလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ။
ကဲ…. အခု ကျနော်တို့ လေ့ကျင့်တဲ့ အနေနဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားသော “လူ” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ဘယ်အကြောင်းက စဆွဲရမလဲ ခန့်မှန်းပေးကြည့်ပါလား။ အဖြေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျော်တော့မဖတ်နဲ့နော်း
မှန်းကြည့်လို့ ရပါသလား ခင်ဗျာ ? ပုံမှာ စလွယ်ကန့်လန့် နှစ်ခုတည်း ပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဥပဒေသ (၄) အရ ကန့်လန့်စင်းနှစ်ကြောင်းအနက် ညာဘက်က အကြောင်းကို ညာမှဘယ်သို့ စဆွဲရပါမယ်။ အောက်မှာ ဆွဲနည်းကို ကြည့်ပါ။
ကဲ…. အခု ကျနော်တို့ လေ့ကျင့်တဲ့ အနေနဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားသော “နှလုံးသား” “မုချ၊ ဆက်ဆက်၊ မပျက်မကွက်” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ဘယ်အကြောင်းက စဆွဲရမလဲ ခန့်မှန်းပေးကြည့်ပါလား။ အဖြေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ (* 2011-12-16 နေ့တွင် စာအမှား ပြင်ပါသည်။)
မှန်းကြည့်လို့ ရပါသလား ခင်ဗျာ ? ဆွဲရမည့် စုတ်ချက်အစဉ်ကို အရောင်နဲ့ ခွဲခြားထားပါတယ်။ အနက်ရောင် အရင့်ဆုံး စုတ်ချက်ကို အရင်ဆုံးဆွဲပါ။ အဖျော့ဆုံးစုတ်ချက်ဟာ နောက်ဆုံးပါ။ ပုံမှာ စလွယ်ကန့်လန့် နှစ်ခုနဲ့ အစက်အပြောက်တွေ ပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဥပဒေသ (၄) အရ ကန့်လန့်စင်းနှစ်ကြောင်းအနက် ညာဘက်က အကြောင်းကို ညာမှဘယ်သို့ စဆွဲရပါမယ်။ ပြီးရင် ဘယ်ကန့်လန့်စင်းဆွဲရပါမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါင်လိုက်ခေါက်ချိုးညီသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဥပဒေသ (၅) အရ အစက်သုံးချက်အနက် အလယ်အစက်ကို အရင်ချ၊ ပြီးတော့မှဘယ်အစက်ကိုချ၊ နောက်ဆုံးမှ ညာအစက်ကို ချပါတယ်။
ကျနော် ဖော်ပြချင်တာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ခင်ဗျ။ အခု အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ “မေးခွန်း” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေ ထိုစာလုံးရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲပုံနဲ့ စုတ် ဘယ်နှစ်ချက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာ နားလည်လောက်ပြီဟု ထင်ပါတယ်။
လေးစားရပါသော ဆရာ ဦးအောင်ရွှေအား ဦးညွှတ်လျှက် ဤဆောင်းပါးကို ရေးပါသည်။ အချက်အလက် ခိုင်မာမှုရှိစေရန် ဝိကီ ကို မှီငြမ်း ထားပါသည်။ ပုံများလည်း ဝိကီမှ ရယူပါသည်။
credit to: www.myanmarfamily.org , aye-ninty.blogspot.com , layhtankone.wordpress.com
ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါပါက အထက်ပါလင့်များအား source အဖြစ် creditပေး ဖော်ပြပေးရန် လိုပါသည်။
Posted by SLIP at 3:50 AM 1 comments
Posted by SLIP at 3:48 AM0comments
Further, the next generation of terrorists will grow up inadigital world, with ever more powerful and easy-to-use hacking tools at their disposal
A lot of hacking is playing with other people, you know, getting them to do strange things. (Steve Wozniak)
Air warfare isashot through the brain, notahacking to pieces of the enemy's body. (J. F. C. Fuller)
Asayoung boy, I was taught in high school that hacking was cool. (Kevin Mitnick)
Further, the next generation of terrorists will grow up inadigital world, with ever more powerful and easy-to-use hacking tools at their disposal. (Dorothy Denning)
I started by hacking around the back yard in Richmond. (Jennifer Wyatt)
My actions constituted pure hacking that resulted in relatively trivial expenses for the companies involved, despite the government's false claims. (Kevin Mitnick)
People sometimes ask me if it isasin in the Church of Emacs to use vi. Usingafree version of vi is notasin; it isapenance. So happy hacking. (Richard Stallman)
There areathousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root. (Henry David Thoreau)
A critical factor in its success was that the X developers were willing to give the sources away for free in accordance with the hacker ethic, and able to distribute them over the Internet. (Eric S. Raymond)
I think Linux isagreat thing, in the big picture. It'sagreat hacker's tool, and it hasalot of potential to become something more. (Jamie Zawinski)
I'mareally good hacker, but I'm notasensible person. (Richard D. James)
If you giveahackeranew toy, the first thing he'll do is take it apart to figure out how it works. (Jamie Zawinski)
In early 1993,ahostile observer might have had grounds for thinking that the Unix story was almost played out, and with it the fortunes of the hacker tribe. (Eric S. Raymond)
Software Engineering might be science; but that's not what I do. I'mahacker, not an engineer. (Jamie Zawinski)
The beginnings of the hacker culture as we know it today can be conveniently dated to 1961, the year MIT acquired the first PDP-1. (Eric S. Raymond)
The hacker mindset doesn't actually see what happens on the other side, to the victim. (Kevin Mitnick)
Then again, my case was all about the misappropriation of source code because I wanted to become the best hacker in the world and I enjoyed beating the security mechanisms. (Kevin Mitnick)
Theater of cruelty meansatheater difficult and cruel for myself first of all. And, on the level of performance, it is not the cruelty we can exercise upon each other by hacking at each other's bodies, carving up our personal anatomies, or, like Assyrian emperors, sending parcels of human ears, noses, or neatly detached nostrils through the mail, but the much more terrible and necessary cruelty which things can exercise against us. We are not free. And the sky can still fall on our heads. And the theater has been created to teach us that first of all. (Antonin Artaud)
Posted by SLIP at 3:50 AM0comments
မြန်မာလိုပေါ်တဲ့ ကြားထဲ ကော်မာ ( , ) ပါပေါ်စေဘို့ အတွက် နည်းတစ်ခု
သုံးရမည့် Number Format သုံးရမည့် Number Format သုံးရမည့် Number Format သုံးရမည့် Number Format
ဖောင့် ဖောင့် ဖောင့် ဖောင့်
Zawgyi-One Zawgyi-One Zawgyi-One Zawgyi-One
ရှင်းလင်းချက်။ ရှင်းလင်းချက်။ ရှင်းလင်းချက်။ ရှင်းလင်းချက်။
General ဆိုတာ Number Format ဖြုတ်ထားတာပါ။ [$-10000455] သုံးပြီး ဂဏန်းအဖြစ်ပြမယ်။ [$-10000455] သုံးပြီး ထောင်ဖြတ်ဂဏန်းအဖြစ်ပြမယ်။ [$-10000455] သုံးပြီး ထောင်ဖြတ်ဂဏန်းအဖြစ်ပြမယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်မျဉ်းကို ခွာရေးမယ်။
အပေါ်က ဇယားမှာ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေရင် အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါရန်။
ပြင်ရမည့်နေရာက Number Format Dialog Box က Custom Format မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (* မနေ့က တင်ပေးတဲ့ Excel Tips: စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကို လိုက်လုပ်ကြည့်ထားတဲ့သူဆို ချက်ချင်း သိပါလိမ့်မယ်။) Number Format ပြောင်းချင်တဲ့ Cell ကို select မှတ်ပြီး Number Format Dialog Box ကို ခေါ်တင်ပါ။ Shortcut key က Ctrl + 1 ဖြစ်ပါတယ်။ Custom Format ကို ရွေးပါ။ ဝင်ပြင်ရမည့် နေရာကို အဝါရောင် ချယ်ပြထားပါတယ်။ (ဒါမှမဟုတ်) Right Click / Format Cells / Category ထဲက Custom ကိုရွေး / Type (အဝါရောင် ချယ်ပြထားတယ်) မှာ ကိုယ်ဖြည့်ချင်တဲ့ ဖော်မက်ကို ဝင်ဖြည့်ပါ။ ဖော်မက် ဥပမာ။ [$-10000455]#,##0
မြန်မာလိုပေါ်တဲ့ ကြားထဲ ကော်မာ ( , ) ပါပေါ်စေဘို့ သုံးနိုင်တဲ့ ဖော်မက်အမျိုးမျိုးကို နှိုင်းယှဉ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အော် .. ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ်။ အခုသုံးပြထားတဲ့ ဖော်မက်တွေ အကုန် One Section only သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Section တွေ အကုန်ပြချင်ရင် တခြား Section တွေအတွက် ဆက်ရေးရပါဦးမယ်။
Posted by SLIP at 3:45 AM0comments